Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Dowlada Farmaajo oo cagta saartay wadadii AUN Cabdullahi Yuusuf Axmed, “Ragna walaalow wuxuu ku dhaamo lawaa”
Shirkii GIDG ee ka dhacay Kismaayo warmurtiyedka laga soo saaray waxey ku eedeyeen dowlada dhexe in heshiisyadii dhex maray iyaga iyo dowlada dhexe midna la fulin ilaa iyo hada.
Dowlada dhexe waxa ay ka fureysatay dhegaha wax ala waxa kasoo baxay shirka Kismaayo, waxeyna kasoo qaaday in maamul goboleed yaba aysan ka jirin dalka.
13 Sep 2018 Goluhu waxa ayso saareen warmurtiyeed labaad kadib marka ay ka waayeen jawaab dhinaca dowlada dhexe oo ku aadan arimaha taagan.
Warmurtiyeedka waxa uu ka koobnaa shan qodob nuqul kamid ah ayaa sidan u qornaa.
Maadama arimaha taagan dhowr jeer oo hore looga hadlay golaha amniga qaran, waxna aysan ka fulin balamadii la galay xalintooda, in loo baahan yahay daraf saddexaad oo door dhexdhexaadin, iyo damaanad qaade ka ahaada shir kasta oo arimahan looga wada hadlayo.
Ra’iisal wasare Kheyre jawaabta uu ka bixiyay waxey noqotay mid ka fog waaqaca dhabta ee ka jira dalkeena, kasoo bilow dowladii Carta ilaa maanta aan joogno daraf saddexaad marna kama maqnaan siyaasada dalkeena, weliba maanta ayey ugu daran tahay ay xaruntoodu tahay Xalane.
Waxaan kula talin lahaa dowlada dhexe labo go’aan mid kood iney qaadato.
1. Heshiisyada la gashay dowlad goboleed yada inay fuliso, xita qeyb kamid ah si lo dejiyo xiisada kacsan.
2. Iney aqbasho daraf saddexaad oo door dhexdhexaadin, iyo damaanad qaade ka ahaada shir kasta oo arimahan looga wada hadlayo.
Labadaan midkood hadaan la qadan waxan dib u laabaneynaa 10 sano taasi hadey dhacdana cidna maslaxad uguma jirto.
Beesha caalamka budget aad u badan ayey ku bixiyeen Soomaaliya dhowr iyo labaatanka sano ee lasoo dhaafay si Soomaali cagaheeda ugu istaagto ha noqoto dhanka siyaasada, amniga islamarkana la socda madaxda hada joogta hadey horumar ka sameeyeen siyaasada iyo amniga dalka ama hadey dhibaato u horseedeen.
Isqab qabsiga hada jira ee sii xoogeestay haduu sii socdo waxaa hubaal ah in besha caalamka aysan indhaha ka qabsan doonin waxa ka socda dalka.
2008 dii Dowladii AUN Cabdullahi Yuusuf Axmed iyo golihii Asmara iyo Baarlamaanka marka ay kala dhamaan waayeen beesha caalamka si toos ah ayey usoo fara gelisay kuna qasabtay Cabdullahi Yuusuf inuu iska casilo xilka marku ka madax adeegay is casilaada waxa lagu wargeliyay in laga xanibayo wax ala waxa hanti iyo lacag bankiyada u yaala isaga iyo familkiisa ugu dambeyntii wuxuu aqbalay inuu xilka iska casilo.
Waxaa nasiib daro ah in toban sano kadib 2008-2018 Dowlada Farmaajana ay cagta saartay isla wadadii dowladii Aun Cabdullah Yuusuf Axmed, waxaa mesha ka muuqata in waxba laga baran waxa uusoo maray dalka waxa cadeen kugu filan labada sano u dambeysay warbixinada ay beesha caalamka ka diyaarisay Soomaaliya.
W/Q: Abukar Macalim Ibrahim